जावास्क्रिप्ट डिटेक्शन र टाईन्टको साथ टाँस्नुहोस्
टाईन्टको साथ केही नयाँ आगन्तुकहरूमा निचोड गर्नुहोस्
बुधबार, मार्च 16, 2011 आइतबार, अक्टोबर 4, 2015 Douglas Karr
सबैजना आफ्नो सामग्रीको पूर्ण लाभ उठाउनका लागि तरिकाहरू खोज्दैछन् Martech Zone कुनै फरक छैन। तपाइँका धेरै पाठकहरूले तपाइँको सामग्री पढ्नेछन् र त्यसपछि अरूलाई पठाउन स्निपेटहरू प्रतिलिपि गरेर टाँस्नुहोस् वा तिनीहरूको आफ्नै पोष्टहरूमा इम्बेड गर्नुहोस्। Tynt एक सेवा हो जुन तपाइँ सजिलैसँग इम्बेड गर्न सक्नुहुनेछ जसले प्रतिलिपि पत्ता लगाउँदछ र प्रतिलिपि गरिएको सामग्रीमा तपाईंको URL थप गर्दछ। जब तपाईं सामग्री कतै टाँस्नुहुन्छ ... voilà… तपाईंको सामग्री तपाईंको साइटमा फिर्ता लि with्कको साथ टाँसियो।
टायन्टको सेवाको व्याख्या गर्ने उत्कृष्ट भिडियो यहाँ छ:
टिन्टले एसईओको सम्बन्धमा लि of्कको शक्तिसँग बोल्दछ। यदि कसैले सामग्री टाँस्छ र प्रकाशन गर्दछ भने, तपाईंले आफ्नो साइटमा राम्रो लिंक पाउनुभयो। मलाई लाग्छ यो ठीक छ - तर म वास्तवमै अधिक मूल्य देख्छु कि पाठकहरूलाई ईमेल र अन्य स्थानहरूमा क्लिक गर्न लिंक प्रदान गरिएको थियो।
पछिल्लो महिनामा ट्यांटले पत्ता लगायो कि मेरो सामग्री 703०4 पटक प्रतिलिपि गरिएको थियो, र परिणामस्वरूप आगन्तुकहरूको संख्या was थियो। सामग्रीका लागि थप 330० नयाँ लिंकहरू सिर्जना गरिएको थियो - ईमेल ग्राहकहरू, ब्राउजर उपकरणपट्टीहरू, र अन्य कागजातहरूमा (सबैलाई होईन SEO को फाइदा… तर सायद केहि!)। यी तथ्या .्कहरू जंगली जानको लागि पर्याप्त छैनन्, तर यो साधारण सेवाका लागि यो प्रशस्त छ। कम से कम, मलाई यो तथ्य मनपर्दछ कि जब म क्रेडिट प्राप्त गर्दैछु जब मानिसहरूले मेरो सामग्रीको प्रतिलिपि गर्दछन् र तिनीहरूलाई तिनीहरूको नेटवर्कमा पठाउँछन्।
टाइन्टले केहि सामग्री प्रतिलिपि र टाँसिएको बारेमा विस्तृत रिपोर्टिंग प्रदान गर्दछ - यो अनमोल हुन सक्छ तपाईंको साइटमा कुन सामग्री लोकप्रिय छ भनेर अनुसन्धान गर्न थाल्दा। यसलाई आफैंमा परीक्षण गर्नुहोस् - यस पोष्टबाट केहि सामग्री प्रतिलिपि गर्नुहोस् र ईमेलमा प्रतिलिपि गर्नुहोस्।
एउटा अन्तिम नोट ... मलाई याद छैन कि मैले टाँन्ट कसरी फेला पारेँ ... तर म निश्चित छु कि मेरो साथी वा पाठकहरूले मलाई यसको बारेमा भने र म कसलाई बिर्सिएँ! यदि यो तपाईं हुनुहुन्थ्यो भने ... मलाई थाहा दिनुहोस् र म यो क्रेडिट केही क्रेडिटको साथ अपडेट गर्नेछु।
पीटर भान ड्याम ब्रोकर
मार्क्स 17, 2011 मा 6: 02 PM
के लिंक यूट्यूब भिडियोमा जान सक्छ? के यसले भिडियो खोजीमा अझ माथि जान मद्दत गर्दछ?